Isithambo sensimbi esakhiweni esinemigangatho emininzi kwii-moya zeShenzhen siphantsi kofakelo
ngomphathi ku 20-04-01
Amathambo esinyithi esakhiwo sentsimbi (No. 7) e-Shenzhen Airlines Headquarter-Guangdong Honghua Construction Co., Ltd, okanye eHonghua, inoxanduva lokuvelisa kunye nokufakela. Enkosi kwii-Airlines zeShenzhen kunye noKwakha iHunan kwakhona. Isakhiwo esinomgangatho omnye yi-bui ...
Ibhokisi yentsimbi ye-girder yebhulorho ewela ngaphezulu
Kwinyanga ephelileyo inkampani yethu iqhuba iprojekthi yebhulorho yentsimbi evela kwinkampani karhulumente yokwakha. Emva kweentsuku ezininzi zomzabalazo, ibhokisi yentsimbi ye-girder yebhulorho yendlela enkulu igqityiwe ukuphakama. Iprojekthi ibekwe kwisiXeko saseZhaoqing, kwiphondo laseGuangdong. Ubude beli nyawo lomkhweli-b ...
Isakhiwo sentsimbi yokugcina
Indawo yokugcina izinto zesinyithi yenziwa ngokubanzi kuthotho lwesakhiwo sensimbi, kubandakanya neentsika zentsimbi, imiqadi yentsimbi, i-purlin njalo njalo. La macandelo aphambili enza ulwakhiwo oluthwala impahla yokugcina. Ngenxa yobunzima bokukhanya kunye nolwakhiwo olulula, kukho enkulu ...
Amanqaku abalulekileyo kuyilo lweworkshop yentsimbi
Xa kuziwa kuyilo lolwakhiwo lwentsimbi lweeworkshop, ezinye izinto kufuneka zithathwe ukuze kwenziwe uyilo olufanelekileyo. Ukuqwalaselwa kubandakanya kodwa kungaphelelanga apho:
Iindidi zezinto zesakhiwo sentsimbi
I-Arbon-manganese steels: Ezona zinto ziphambili zeekhemikhali ziyintsimbi, icarbon kunye nemanganese. Ezi zihlala zibizwa ngokuba zii-steels ezinobume obucekeceke okanye i-carbon steels. Amandla kunye ne-ductility aphezulu, kwaye ukuba noqoqosho kusetyenziswa ngokubanzi. Udidi oludumileyo phakathi kolu hlobo lubakala lwe-ASTM A36. T ...